पत्रपत्रिकाबाट कांग्रेस क्षेत्रीय अधिवेशनमा देउवा पक्षलाई अग्रता
२३ माघ, काठमाडौं । कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको मत गणता राति अवेरसम्म जारी रहेपनि घोषित परिणामा शेरबहादुर देउवा पक्षले आफ्नो स्थिति सुदृढ गरेको संकेत मिलेको छ । तराईका केही जिल्लाबाहेक सबै क्षेत्रमा अधिवेशन सम्पन्न भए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयको मतगणना परिणाम...
भियतनामी युवतीको राहदानीमा अर्कै यात्रु उडेपछि…
२३ माघ, काठमाडौं । भियतनाकी एक युवतीको राहदानी प्रयोग गरी त्रिभुवन विमानस्थलबाट अर्के व्यक्ति उडेकी छिन् । भियतनामकी नागरिक ले थि किमतुको राहदानीमा उडेको व्यक्ति को थियो भन्ने बारेमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र प्रहरी बेखबर रहेको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ । पुस २७ गते...
प्रधानमन्त्री ओलीका अबका योजना
२३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकालमा मुलुकमा केही गरेर देखाउन विकासको गतिलाई तीब्रता दिने घोषणा गर्दै आफूमाथि प्रश्न उठाउने ठाँउ नै नदिने बताएका छन् । उनले राजनीतिक क्रान्तिबाठ मुलुक आर्थिक विकासमो नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको जनाएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार...
देशभरिका असपतालमा नक्कली चिकित्सक
२३ माघ, काठमाडौं । अरुलाई परीक्षा दिन लगाएर एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेका नक्कली चिकित्सकहरु देशभरिका अस्पतालमा कार्यरत रहेको खुलेको छ । काठमाडौं तथा तर्राका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत १३ जना त्यस्ता नक्कली चिकित्सकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचर छ । एसएलसी र प्लस टुको...
साग खेलकुदको प्रचार नेताको नाममा
२३ माघ, काठमाडौं । भारतको गुवाहाटीमा शुक्रबारदखि सुरु भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको १२ औं संस्करणको प्रचारप्रसारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत वरिष्ठ नेताहरुको फोटो राखेर गरिएको छ । सहरका विभिन्न स्थानमा राखिएको होर्डिङबोर्ड र फ्लेक्सहरुमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फोटो देखिएको अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ...
अब प्रधानाध्यापकले पढाउनु नपर्ने
२३ माघ, काठमाडौं । अरु शिक्षकले जसरी नै बिद्यार्थीलाई पढाउनुपर्दा बिद्यालय व्यवस्थापनमा समय दिन नसेकपछि प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापनको मात्रै जिम्मेवारी दिने गृहकार्य अघि बढेको छ । अगामी वर्षबाट सुरु हुने बिद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम मा प्रधानाध्याकले कक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने गृह कार्य अघि बढाएको...
वीरगन्ज नाकामा फेरि धर्ना बस्ने मोर्चाको चेतावनी
२३ माघ, काठमाडौं । तमलोपा महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले पुनः नाकामा धर्नामा बस्ने चेतावनी दिएका छन् । मोर्चाको जनपरिचालन समिति पर्साका संयोजक प्रदीप यादवले पनि फेरि धर्नामा बस्ने बताएको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ । जनताको आन्दोलनमा तस्कर र प्रैहरी मिलेर गरेको हस्तक्षेप सहृय हुँदैन,...
जन्मकैद ३० वर्ष प्रस्ताव
२३ माघ, काठमाडौं । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापवन गर्न बनेको प्रस्तावित विधयकले जन्मकैद सजाय २० बाट ३० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव अघि सारेको छ । विधायन समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पास भए जन्मकैद पाएका व्यक्तिले १० वर्ष बढी जेलसजाय भोग्नुपर्ने आजको नागरिक दैनिकमा...
कांग्रेसको प्रतिनिधि छनोट आज
२२ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आज शुक्रबार हुने भनिएको क्षेत्रीय अधिवेशन तराइका आठ जिल्लामा नहुने भएको छ । तराईका सप्तरी, सिराह, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा आज शुक्रबार क्षेत्रीय अधिवेशन नहुने भएको हो । जनकपुरमा रहेका कांग्रेस संगठन...
भारतमा साग खेलकुदको बेवास्ता
२२ माघ, काठमाडाैं । दक्षिणएसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिताको १२ औं संस्करण शुक्रबारदेखि भारतको गुवाहिटीमा सुरु हुँदैछ । इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय रंगशालामा एक समारोहबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतियोगिता उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एसियाली, राष्ट्रमण्डल, अफ्रो एसियनजस्ता ठूला प्रतियोगिताको सफल आयोजना गरिसकेको भारतले...
डेनमार्कबाट बाच्छी मात्रै जन्मने वीर्य ल्याउन सम्झौता
२२ माघ, काठमाडौं । पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगममी ३ बर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य पूरा गर्न डेनमार्कमा उच्च नश्लका गोरुका वीर्य खरिद सम्झौता गरेको छ । कृत्रिम गर्भाधानमार्फत त्यहाँका गोरुका वीर्यबाट बाली लागेको गाईले ९० प्रतिशत बाच्छी जन्माउने र त्यस्ता बाच्छीको दूध दिने क्षमता...
सभापतिका आकांक्षी कस्ता ?
२२ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेश नजिकिदै जाँदा नेतृत्वबारे चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन् । पार्टी नेतृत्व गर्न अहिले तीनजना नेताहरु आकंक्षीका रुपमा रहेका रहेका छन् । जसमध्ये पारिवारिक विरासतबाटै स्थापित भएका सुशीलले उमेदवारी दिनेबारे मुख नखोलिसकेको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचर छ । तर,...
सेना चढेको माइक्रोबस दुर्घटना, ८ को मृत्यु
वाइसीएलका केन्द्रीय सदस्य नै इन्धन कालोबजारीमा !
नयाँ शक्तिसँग जोडिएको बहसः सिद्धान्तनिष्ठहरूलाई सिद्धान्तहीनको जवाफ
नाकाबन्दीपछि पहिलो पटक वीरगञ्जबाट इन्धन भित्रियो
नक्कली प्रमाणपत्रधारी १२ चिकित्सक पक्राउ
साग फुटबलमा नेपालले आइतबार भुटानसँग खेल्ने
सागमा नेपाललाई तेश्रो पदक
१२औं सागमा विकासले दिलाए नेपाललाई रजत पदक
नामिबियालाई हराउँदै भारत सेमिफाइनलमा
१२ औं सागमा नेपाललाई पहिलो पदक, देवीले जितिन कास्य
मुख्य पृष्ठ हाम्रो बारे विज्ञापन सम्पर्क© २००६-२०१३ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित
मुख्य पृष्ठ हाम्रो बारे प्रयोगका सर्त विज्ञापन सम्पर्क © २००६-२०१६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित